Igumbi elinobunewunewu eZacapa - I-Airbnb
Igumbi elinobunewunewu eZacapa
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguSantiago
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uSantiago iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ihotele ebukekayo yohlobo lobukoloniyali ehonjiswe ngokugqwesileyo ngamadama okuqubha kunye neendawo zokupaka zabucala. Ijikelezwe yimimandla eluhlaza kunye nendalo. Igqibelele ukuphumla nosapho kunye nabahlobo.
Igumbi elihle kwaye likhululekile. Inamanzi ashushu, i-air conditioning kunye ne-43 ”smart TV. Kubandakanya ukufikelela kumadama okuqubha abantu abadala kunye nabantwana, iindawo zokuphumla. Ngaphakathi kwipropati uya kufumana indawo yokutyela kunye nesikhululo segesi.
Áreas verdes para descanso y caminar, piscina para adultos y niños. Restaurante.
Igumbi elihle kwaye likhululekile. Inamanzi ashushu, i-air conditioning kunye ne-43 ”smart TV. Kubandakanya ukufikelela kumadama okuqubha abantu abadala kunye nabantwana, iindawo…
4.86 (iingxelo zokuhlola 22)
Ifumaneka kwi-Km 180 Carretera al Atlantico. Ifumaneka kwimizuzu eli-15 ukusuka eGualán naseLos Amates. Imizuzu nje engama-30 ukusuka kwiQuiriguá Archaeological Park kunye nemizuzu engama-45 ukusuka ePlaya Dorada. Imizuzu engama-30 ukusuka kwiMyuziyam yase-Estanzuela Paleontology. Iyure enesiqingatha ukusuka eRío Dulce.
Umbuki zindwendwe ngu- Santiago
Viajero y soñador.